ရှောက်လှမ်း ချီတက်ခြင်း | Shwe Canaan TV
00Unknown Tuesday, 19 July 2016
Stepping to Your Vision အမှုတော်ဆောင်တစ်ဦး သို့မဟုတ် ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးအတွက် အရေးကြီးဆုံးသောအရာ တစ်ခုမှာ ဘုရားရှင်အပ်နှင်းထားသည့် ရူပါရုံ...
Stepping to Your Vision
အမှုတော်ဆောင်တစ်ဦး သို့မဟုတ် ခေါင်းဆောင်
တစ်ဦးအတွက် အရေးကြီးဆုံးသောအရာ တစ်ခုမှာ
ဘုရားရှင်အပ်နှင်းထားသည့် ရူပါရုံပန်းတိုင်ဆီသို့ အ
ရောက်လှမ်းချီ တက်ခြင်းပင် ဖြစ် သည်။ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရူပါရုံတူညီနိုင်မည် မဟုတ်သော်လည်း ရူံပါရုံသို့ ရောက်ရှိလိုသူတိုင်း သတိပြုရမည့် အခြေခံမူ
များမှာမူ အတူတူပင် ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းအခြေခံမူများကို ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၁)၌ တွေ့ ရှိနိုင်ပါသည်။
၁။ နောက်လိုက် သို့မဟုတ် တပည့်အရင်ဖြစ်ပါ (BeaFollower, First)
“ထာ၀ရဘုရား၏ကျွန် မောရှေသည် အနိစ္စရောက်သောနောက် မောရှေလက်ထောက် နုန်၏ သား ယောရှုအား ထား၀ရဘုရား …”(အငယ်၊ ၁)
ဘုရားသခင်၏လူ မောရှေ အနိစ္စရောက်သွားသည်နှင့် မောရှေ၏လက်ထောက် (သို့) နောက် လိုက် တပည့်ရင်းဖြစ်သော ယောရှုအား ဘုရားသခင်က စကားပြောလာပါသည်။ ဘုရားသခင်က အခြားသူများကို စကားမပြောပါ။ ယောရှုကိုသာ ပြောဆိုလာပါသည်။ အကြောင်းမှာ ၄င်းအချိန်အခါ၌ မောရှေကဲ့သို့ ဣသရေလလူများကို ဦးဆောင်နိုင်သည့် အရည်အချင်းရှိသူမှာ ယောရှုဖြစ်နေသော ကြောင့်တည်း။
ယောရှုသည် ‘ခေါင်းဆောင်’ မဖြစ်ခင်၊ မောရှေ၏ ‘နောက်လိုက်တပည့်’ အဖြစ် နှစ်ပေါင်း (၄၀) ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားရှင်အပ်နှင်းထားသည့် ရူပါရုံဆီသို့ အရောက်လှမ်းချီတက်ရာ၌ လိုအပ်သည့် ပညာ၊ ၀ိညာဉ်ဘိသိက် နှင့် စွမ်းရည်တို့ကို ရရှိရန် ကျွနု်ပ်တို့ ရှေ့ ၌ရှိသော ခေါင်းဆောင် ကြီးများ၏ အသက်တာနှင့် ဆက်ကပ်မှုကို စံနမူနာထား သင်ယူကြရမည်။ ခေါင်းဆောင်မှုအတွက် အကောင်းဆုံး စံနမူနာဖြစ်သော ယေရှုခရစ်တော်ကို စေ့စေ့ကြည့်ရှုရမည် (ဟေဗြဲ၊ ၁၂း ၁-၂)။
‘ခေါင်းဆောင်မှု’ ဟူသည် နေ့ချင်းညချင်း ရရှိလာသည့် အရာမဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏ ပုံသွင်း ပြုပြင်မှုကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ခံယူပြီးမှသာလျှင် ထူးချွန်ထက်မြက်သည့် ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ဦး ဖြစ်လာနိုင်သည်ကို သတိပြုရမည်။
၂။ အဆင်သင့် ဖြစ်ပါ (Be ready)
“ငါ၏ ကျွန် မောရှေသည် အနိစ္စရောက်လေပြီး။ သို့ဖြစ်၍ သင်နှင့် သင်၌ပါသော ဤလူအပေါင်း တို့သည် ယခုထ၍ ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဘက်သို့ ကူးကြလော့။ ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ငါပေးသော ပြည်ကို ၀င်စားကြလော့” (အငယ် ၂)။
ခေါင်းဆောင်ကြီးမောရှေ သေဆုံးသွားသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ ရူပါရုံသည် သေဆုံးသွား ခြင်း မရှိပါ။ အကယ်စင်စစ် ခေါင်းဆောင်မှုဟူသည် ဘုရားသခင်၏ ရူပါရုံကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ရန် မျိုးဆက်တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ လက်ဆင့်ကမ်း ကူးပြောင်းပေးရသည့်အရာ ဖြစ်သည်။ မောရှေ မရှိတော့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားအလုပ်ကို ဆက်လုပ်ရန်အတွက် ယောရှု ရှိပါသည်။
ကျွနု်ပ်တို့ သတိပြုရမည့်အချက်မှာ ‘ခေါင်းဆောင်မှု အမွေကို သွေးသားတော်စပ်မှုအားဖြင့် မရနိုင်’ ဟူသည့်အချက်ပင် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အစေကိုခံရန် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးသူကိုသာ ဘုရားသခင်က ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ရွေးကောက်ခန့်ထားပါသည်။
ယောရှုအား ဣသရေလလူမျိုးများနှင့်အတူ ယော်ဒန်မြစ်ကို ဖြတ်ကူးဖို့ရန် ဘုရားသခင် မိန့်ဆိုခဲ့သည့် အချိန်၌ ယောရှုအဆင်သင့် ဖြစ်နေပါသည်။ ဘုရားရှင်မိန့်ဆိုပြီး (၃)ရက်အတွင်းမှာပင် ယော်ဒန်မြစ်ကို ဖြတ်ကူးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ခေါင်းဆောင်ဟူသည် အမြဲအဆင်သင့်ရှိသူး ဖြစ်ရမည်။ သတိ၀ိရိယနှင့် ပြည့်စုံပြီး ၀ိညာဉ်ရေးရာ၌ နိုးကြားနေသူ ဖြစ်ရမည်။ ‘ ကြိုတင်ပြင်ဆင် အောင်ပွဲ၀င်’ ဆိုသည့်အတိုင်း ယနေ့ကျွနု်ပ်တို့အားလုံး ‘ခရစ်တော်၏ ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာခြင်း’ အတွက် အဆင် သင့်ဖြစ်နေသူများ ဖြစ်ရမည်။
၃။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် လျှောက်လှမ်းသူ ဖြစ်ပါ (Beaperson of Faith)
“မောရှေအား ငါကတိရှိသည်အတိုင်း သင်တို့နင်းသမျှသောမြေကို သင်တို့အား ငါပေးမည်” (အငယ် ၃)။ ဘုရားရှင်က ယောရှုနှင့် ဣသရေလလူမျိုးများအား ‘ သင်တို့နင်းသမျှသောမြေ ’ ကို ‘သင် တို့အား ငါပေးမည်’ ဟု မိန့်ဆိုပါသည်။ ဘုရားရှင် ကတိထားရာမြေ (Promised Land) ကို ၀င်စားဖို့ ရန် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် စတင်ခြေလှမ်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ယောရှုအနေနဲ့ ခါနာန်မြေကို ဆင်ကန်းတောတိုး ချဉ်းနင်း၀င်ရောက်ခြင်း မဟုတ်ပေ။ ဘုရားရှင်က မောရှေအားဖြင့် ပြုခဲ့သော ကတိတော်အတိုင်း ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ၀င်ရောက်ခြင်း ဖြစ် သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားဗျာဒိတ်တော် မရဘဲ ဂမူးရှူးထိုး လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရမည်။ ဘုရားသခင်း၏ စေခိုင်းချက်နှင့် ကတိတော်ကို တိကျစွာ လက်ခံရရှိပြီး စတင်အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်သာ ကျွနု်ပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် လျှောက်လှမ်းသူ ဖြစ်လာနိုင်သည်။
အင်္ဂလိပ်စကားပုံ တစ်ခုရှိပါသည်။ ‘မိုင်တစ်ထောင် ခရီးကို သွားခြေတစ်လှမ်းအားဖြင့် အစပြုရ မည်’ ( A journey ofathousand miles begins withastep) ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးသည် မိမိအား အပ်နှင်းထားသော ရုပါရုံကို ပြည့်စုံစေဖို့ရန် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် လက်တွေ့ စတင်အကောင်အထည် ဖော် ရမည်။ ယနေ့ကမ်ဘာ့အကြီးဆုံး အသင်းတော်ကို တည်ထောင်သူ ကိုရီးယားမှ ဒေးဗစ်ယောင်ဂီချို (David Yonggi Cho) သည် သူ၏ ပထမဆုံးအသင်းတော်ကို သူအပါအ၀င် လူ(၅)ဦးနှင့် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၄။ တိကျသေချာသောသူ ဖြစ်ပါ (Beaperson of Specific)
“တော်ကြီးမှစ၍ လေဗနုန်တိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ ဥဖရမြစ်ကြီးမှစ၍ ဟိတ္တပြည် တစ် လျှောက်လုံးပါလျက် နေ၀င်ရာဘက် ပင်လယ်ကြီးတိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ သင်တို့နယ်အပိုင်း အခြား ဖြစ်ရမည်’ (အငယ် ၄)။
ကတိတော်မြေ၏ နယ်နမိတ်ကို ဘုရားရှင်က တိကျစွာ ကြိုတင်သတ်မှတ် ပေးပါသည်။ ယောရှုအနေနဲ့ သူဦးဆောင်၍ ၀င်ရောက်သိမ်းပိုက်ရမည်။ နယ်ေြမြ၏ အကျယ်အ၀န်းကို တိတိကျကျ သိဖို့ရန်မှာ အလွန်ပင် အရေးကြီးလှပါသည်။ အကြောင်းမှာ ထိုမြေကို ဣသရေလအမျိုးအနွယ် အသီးသီးအား ေ၀၍ အမွေပေးရမည် ဖြစ်သောကြောင့်တည်း (၁း ၆)။
ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူသည် မိမိအား ဘုရားသခင်စေခိုင်းသည့်အရာကို တိတိကျကျ သိရမည်။ ထိုသို့ သိဖို့ရန် အချိန်များစွာ ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပြီး ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကို စူးစိုက်နား ထောင်ရမည်။ နောက်လိုက်များအား သူရရှိသော ရူပါရုံအကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ပြောဆိုနိုင်သူ ဖြစ် ရမည်။ စေ့စပ်သေချာ၍ ပြတ်သားစွာ လုပ်ဆောင်တတ်သော သူ၏ စကားကိုသာ လူများက နာထောင် ကြမည် ဖြစ်သည်။
၅။ ဘုရားသခင်အတူပါရှိကြောင်း သေချစေပါ
(Be sure that God is with you)
“သင့်အသက် တည်သည်ကာလပတ်လုံး သင့်ရှေ့ ၌ အဘယ်သူမျှ မခံမရပ်နိုင်ရာ။ မောရှေနှင့် အတူ ငါရှိသကဲ့သို့ အသင်နှင့်အတူ ငါရှိလိမ့်မည်။ ငါသည် သင့်ကို မစွန့်၊ သင့်ကို ပစ်၍ မထား” (အငယ် ၅)။
ယောရှုအနေနဲ့ မောရှေအားဖြင့် ဘုရားသခင်ပြုခဲ့သော နိမိတ်လက္ခဏာ၊ အံ့သြဖွယ်အမှုများကို တွေ့ မြင်ခဲ့ရပြီး ဖြစ်သည်။ မောရှေသည် သာမာန်လူသားတစ်ဦးသာ ဖြစ်သော်လည်း၊ ဘုရားသခင် သူနှင့်အတူ ရှိသည့်အခါ ကြီးမားအံ့သြဖွယ်အမှုများကို ပြုခဲ့ပါသည်။ ယခုဘုရားသခင်က ယောရှုအား ‘ငါသည် သင်နှင့်အတူ ရှိမည်’ ဟု တိုက်ရိုက်ပြောဆို ကတိပေးနေသည်မှာ မည်မျှအားရကျေနပ်ဖွယ် ကောင်းသောအရာ ဖြစ်ပါသနည်း။
ဘုရားသခင်အပ်နှင်းထားသော ရူပါရုံပြည့်စုံဖို့ရန် ဘုရားသခင် အတူပါရှိမှသာ ဖြစ်နိုင်ပေသည်။ ယောသပ်နှင့်အတူ ဘုရားသခင် ရှိတော်မူသောကြောင့် သူပြုလေရာရာ၌ အောင်မြင်မှု ရခဲ့ပါသည် (က၊ ၃၉း ၂-၃)။ ဒါ၀ိဒိနှင့် ဘုရားသခင်အတူရှိတော်မူသောကြောင့် သိုးကျောင်းသားဘ၀မှ ရှင်ဘုရင်ဖြစ် သည်အထိ ပြုလေသမျှ အောင်မြင်ခဲ့ပါသည် (၁ရာ၊ ၁၈း ၁၄)။
ကျွနု်ပ်တို့သည် မောရှေကဲ့သို့ ‘ကိုယ်တော် ကျွနု်ပ်တို့နှင့်အတူ မကြွလျှင် ကျွနု်ပ်တို့ကို ဤ အရပ်မှ မသွားပါစေနှင့်’ ဟု ဆုတောင်းသင့်ပါသည် (ထွက်၊ ၃၃း ၁၅)။ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေနဲ့ ဘုရားသခင်အတူပါရှိခြင်း၏ သက်သေကို ရရှိမှသာ စီမံကိန်း (သို့) အလုပ်တစ်ခုခုကို စတင်ရပါမည်။
၆။ အားယူ၍ ရဲရင့့်ပါ (Be Strong and courageous)
“…. အားယူ၍ အလွန်ရဲရင့်ခြင်း ရှိလော့” (အငယ် ၆)
“ …. အားယူ၍ ရဲရင့်ခြင်း ရှိလော့။ မကြောက်နှင့်၊ စိတ်မပျက်နှင့်” (အငယ် ၉)
“ …. အာယူတော်မူပါ။ ရဲရင့်ခြင်း ရှိတော်မူပါဟု ယောရှုအား ပြန်လျှောက်ကြ၏” (အငယ် ၁၈)
ယောရှုအနေနဲ့ အခြေအနေတွေကို ကြည့်ပြီး ကြောက်ရွံ့ ခြင်း၊ စိတ်ပျက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ယေရိခေါမြို့ ရိုးတံတိုင်းကြီး၊ ထွားကြိုင်းသန်စွမ်းသော လူ့ ဘီလူးကြီးများ၊ အင်အားကြီးမားလှသည့် စစ်တပ်ကြီးများနှင့် လျှံကျနေသော ယော်ဒန်မြစ်ရေ၊ သည်အရာတွေက သူ့ အတွက် ကြောက်ရွံ့ ခြင်း၊ စိတ်ပျက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သည်အတွက်ကြောင့်ပဲ ဘုရားသခင်က ‘အားယူ၍ ရဲရင့်ခြင်းရှိပါ’ ဟု သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ပြောဆိုအားပေးပါသည် (အငယ် ၆၊ ၇၊ ၉)။ ဣသရေလလူတို့ကလည်း တစ်ကြိမ် ပြောဆိုကြောင်း တွေ့ ရပါသည် (အငယ် ၁၈)။
ခေါင်းဆောင်ဟူသည် ခွန်အား၊ ရဲစွမ်းသတိ္တနှင့် ပြည့်စုံရမည်။ အထူးသဖြင့် ၀ိညာဉ်ခေါင်း ဆောင်သည် ၀ိညာဉ်တော်၏ ဘိသိက်တန်ခိုး၊ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ ခိုင်မှုနှင့် ပြည့်စုံသူ ဖြစ်ရမည်။ ကျမ်းစာက “သခင်ဘုရားအားဖြင့်လည်းကောင်၊ တန်ခိုးတော်အရှိန်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိကြလော့’ဟု မိန့်ဆိုိထားပါသည် (ဧဖက် ၆း ၁၀)။
စာတန်မာရ်နတ်သည် ကျွနု်ပ်တို့အား လွယ်လွယ်ကူကူနှင့် အရှုံးပေးလိမ့်မည် မဟုတ် ပါ။ သည်အတွက်ကြောင့်ပဲ ကျွနု်ပ်တို့သည် သခင်ဘုရားနှင့် များများအချိန်ယူ မိတ်သဟာယဖွဲ့ ရမည်။ ထိုသို့သောအားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့သည် တန်ခိုးတော်အရှိန်နှင့် ပြည့်စုံသူများ၊ ရဲစွမ်းသတိ္တနှင့် ပြည့်၀သူများ ဖြစ်လာပြီး စာတန်မာန်နတ်ဆိုး၏ နည်းပရိယာယ်နှင့် လုပ်ရပ်များကို အနိုင်ယူချေမှုန်း နိုင်မည်ဖြစ် ပေသည်။
၇။ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း နာခံလုပ်ဆောင်သူ ဖြစ်ပါ
(Be careful to do according to His Word)
“ကြံစည်လေသမျှအတိုင်း အောင်မည်အကြောင်း ထိုတရားလမ်းသို့ လိုက်လော့။ လက်ယာ ဘက် လက်၀ဲဘက်သို့ မလွှဲနှင့်” (အငယ် ၇)။
“ထိုပညာတ္တိကျမ်းစာ၌ ရေးထားသမျှအတိုင်း ကျင့်မည်ဟု စောင့်ရှောင့်ခြင်းအလို့ငှာ ကျမ်းစာကို မဖတ်မရွတ်ဘဲ မနေ။ နေ့ညမပြတ် ကြည့်ရှုဖတ်ရွတ်ရမည်။ သို့ပြုလျှင် သင်သည် အကြံထမြောက်၍ အောင်မြင်လိမ့်မည်” (အငယ် ၈)။
ယောရှုအသက်တာ၌ ပြုလေသမျှ အောင်မြင်ခြင်း၏ သော့ချက်ကို ဤနေရာ၌ ကျွနု်ပ်တို့ တွေ့ ရှိရပါသည်။ ၄င်းမှာ ကျမ်းစာကို နေ့ညမပြတ်ကြည့်ရှုဖတ်ရွတ်ခြင်းနှင့် ကျမ်းစာအတိုင်း နာခံအသက်ရှင် ဖြင်းနှင့် ကျမ်းစာအတိုင်း နာခံအသက်ရှင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ပေးခဲ့သော ဤနိယာမတရား သည် ကမ်ဘာ့ဦးမှာ စ၍ ယနေ့ထိတိုင် ပြောင်းလဲခြင်း မရှိသေးပါ။ ‘ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို နေ့ညမပြတ် ကြည့်ရှုဖတ်ရွတ်ခြင်း၊ ၀န်ခံပြောထုတ်ခြင်း၊ ဆင်ခြင်အောက်မေ့ခြင်း၊ ထိုနှုတ်ကပတ်တော်
အတိုင်း သတိပြုအသက်ရှင်ခြင်း’ သည်အရာတွေက အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးမည့် သော့ချက်များဖြစ်ကြောင်း ၀ိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တိုင်း နားလည်သဘောပေါက် ရမည်။
၀ိညာဉ်ခေါင်းဆောင်သည် လောက၏ စံနှုန်းအတိုင်း အသက်ရှင်သူ မဖြစ်ရ။ သမ္မာကျမ်းစာ အား စံထား၍ အသက်ရှင်ရမည်။ ရူပါရုံပန်းတိုင်ဆီသို့ အရောက်လှမ်းချီတက်ရာတွင် သမ္မာကျမ်းစာ၏ စည်းမျဉ်းဥပဒေများ၊ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်မှသာ အောင်မြင်မှုကို အလျင်အမြန် ဆွတ် ခူးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း နှိုးဆော်ေ၀ငှ လိုက်ရပေသည်။
Shwe Canaan TV: ရှောက်လှမ်း ချီတက်ခြင်း